“म बाँ, च्नु त अब के का लागि ? सडकछाप भनेर चिनिए”। – सपना रोका मगर ( भिडियो सहित) – Ap Nepal
बीबीसीले प्रत्येक वर्षकार्यक्रम अन्तर्गत महिलाकेन्द्रित समाचारलाई विशेष महत्त्वका साथ प्रकाशित तथा प्रसारित गर्छ। यही अवसरमा विश्वभरि विशेष योगदान दिने १०० महिलाको नाम बीबीसीले प्रकाशित पनि गर्ने गरेको छ। यसपटक नेपाल बाट १०० महिलाको सूचीमा १९ वर्षीया सपना रोका मगर परेकी छन्। उनी बेवारिसे शव व्यवस्थापनमा संलग्न छिन्।
बीबीसीको सूचीमा परेपछि उनले आफू गौरवान्वित भएको बताएकी छन्। “यसबाट मैले थप प्रोत्साहन पाएकी छ। अनि यो सामान्य नेपाली महिलाको लागि प्रेरणा हो, हामी सबैको लागि ठूलो सम्मान हो।”
अलपत्र परेका ला’शको व्यवस्थापन गर्न पाउँदा आफूलाई सन्तुष्टि मिल्ने उनि बताउछिन । साथीभाइको संगतका कारण आफूले पनि सडकको जिन्दगी भोगेको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन् ‘एसएलसीपछि साथीभाइको लहलहैमा लागेर विश्वासघात मा परेर सडकमा पुगेको थिए । तर अहिले म त्यो ठाउँमा छैन, जुन ठाउँमा म हुन्थ्ये । म अहिले धेरै खुशी छु । यो कामले मलाई आफ्नै परिचय दिएको छ ।’
२०७३ सालमा म्याग्दीमा एसएलसी सकेकी उनि त्यसपछि सदरमुकाम बेनीमा आएर कक्षा ११ मा भर्ना भएकी थिइन । तर, त्यसपछि साथी संगतमा परेर उनि काठमाण्डौ आएकी थिईन । अहिले आफूले राम्रो कामको सुरुवात गरे पनि केहीले विगतलाई सम्झाएर आ’लोचना गर्ने गरेका उनि बताउने गर्छिन्।
सपना रोका मगर ले आफ्नो दु’ख र पि’डा व्यक्त गर्दै अन्तर्वार्तामा आफु बाच्नु को पनि के अर्थ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेकि छिन् । सपना ले आफुले धेरै दुख पि’डा भोगेको र आमा लाई मानिस ले छोरी बि’ग्रियो भन्दा दुख लागेको र अहिले आमा को नाम राखेको समेत कुरा उल्लेख गरेकी छिन।
सपना रोका मगर र विनय बस्नेत बीच को वि’वाद अहिले प्रहरी सम्म पुगेको छ । विनय जंग ले बोलेको श’ब्द माथि सपना ले प्रहरी मा उजुरी दिएकी छिन । सपना रोका आज प्रहरी चौकी पुगेर उजुरी गरेकी छिन ।
बस्नेतले युट्युव च्यानललाई दिएको अन्तरवार्तामा सपनाका नां’गा त’स्वीर देखाइदिने ध’म्की दिएपछि मगरले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी हुन् । सपनाले बस्नेतविरूद्ध अ’भद्र व्यवहारको मुद्दा जाहेरी दिएकी हुन् । उनका अनुसार बस्नेत अहिले काठमाडौं बाहिर छन्। प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ।
क्यानाडा नेपालले लिएको यो कुराकानीमा उनले भनेकी छन् “म बाँच्नु त अब के का लागि ? सडकछाप भनेर चिनिए”। – सपना रोका मगर हेरौ भिडियो सहित:
Prevराहुल र स्मिताको भन्दा अझै मार्मिक कथा,७ महिना परपुरुषसँग बसेकी श्रीमती फेरी स्वी,कारे,खुसीले दुबै रोए (भिडियो सहित)
Nextसपनाले दिइन् प्रहरी चौकीमा उ’जुरी, विनयजंग पक्राउ पर्दै (भिडियो सहित)
‘अत्या,चारले सीमा नाघ्यो’ भन्दै पूर्वपत्नी ढकालविरू’द्ध कडा कानुनी कद’म चाल्दै मनाेज गजुरेलल। लेखे यस्तो स्टाटस्
चीनको २१ टन तौलको रकेट भ’ग्नावशेष हिन्द महासागरमा खस्यो (भिडियो )
करोडौंले हेरेको गीतका यि गायकलाई कसैले चिन्दैन, बाच्नै नसकेपछि बिदेश जाँदै (भिडियो सहित) (35023)